जिउँदैलाई मरेको बनाई सम्पत्ति कब्जा गरि लक्ष्मीलाई बनाइयो घर न घाटको, मृत्युको मुचुल्का बनाएर सम्पत्ति हड्प्ने देवर कहाँ छन् ? – Enepali News
June 26, 2020 181
काठमाडौँ,असार १२-बालाजुकी ६४ वर्षीया लक्ष्मी पुतुवार फागुन १४ गते नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन्। तर त्यहाँ उनको नागरिकता नबन्ने अवस्था आयो। किनकि वडाको सिफारिस आवश्यक भए पनि उनले लगेकी थिइनन्। उनले त आफैंलाई मृत भनेर अर्कैले झन्डै २५ वर्षअघि बनाएको मुचुल्काको कागजमात्र बोकेकी थिइन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन १५ गते उक्त बेहोरा सर्जिमिनका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु पठाएको छ। प्रहरीले प्रारम्भिक विवरण पठाएपछि यसबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिने प्रशासनले जनाएको छ। ‘यथार्थ बेहोरा बुझ्न हामीले मुचुल्का र अन्य कागजात प्रहरीमा पठाएका छौं। किर्ते रहेछ भने त्यस सम्बन्धमा कारबाही थाल्छौं,’ प्रजिअ दाहालले भने। उनका अनुसार प्रहरीको सर्जिमिन रिपोर्ट भने आएको छैन। रिपोर्टपछि उनको नागरिकता बनाउन कार्यालयले सहायता गर्नेछ। तर अहिले लकडाउन भएका कारण जिल्ला प्रशासनले यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको भनाइ छ
Prevचट्याङ लागेर भारतमा १०७ को ज्या न गयाे
Nextहिमानीको परिवार, सिकर राजाकी छोरी ! सिंह बाट कसरी बनिन् शाह? यो भिडियो हेर्नुहोस